Bracalente n'ichepụta Group - Bracalente Manufacturing Group
CORONAVIRUS (COVID-19) Nwelite (pịa ebe a)
Anyị na-ego ọrụ
2: Ntughari nkwekọrịta
3: Chain Chain
4: Mmesi obi ike
5: Njikwa Egwu
6: Ọganihu Na-aga n’ihu
Nkọwa | Nchedo
Ike, Akụrụngwa & Asambodo
Omenala na oru
Ihe nketa anyị
BMG ugbu a
Otu Bracalente Manufacturing Group
Nkenke Manufacturing Solutions maka Ahịa Globalwa
Lelee Akụkọ Bracalente Anyị
Ruo ihe karịrị ọgbọ atọ, anyị na-enye ndị ahịa anyị ihe ngwọta.
Akụkụ anyị bụ ihe ndị bụ isi na-enyere aka ịkwalite ọrụ site na Aerospace, Automotive, Agriculture and Electronics to Industrial, Medical, Oil & Gas, Recreational and Tactical. Ihe dị iche anyị bụ na anyị na-aga ahịa gị. Ndị anyị bụ ndọtị nke otu gị. Anyị maara n'ichepụta n'ihi na anyị bụ ndị nrụpụta na-edozi azịza gburugburu azụmahịa gị.
Anyị na-akpọ ya Bracalente Edge.™
Muta otu anyi si eme ya
Akụkọ Bracalente anyị
Anyị nkenke n'ichepụta ihe na-eme ka ndị nsogbu ahịa na ndị ndu ọhụụ na ikuku, na ala na ebe niile dị n'etiti.
aerospace Agriculture Automotive Electronics Industrial Medical Mmanụ & Gas Ihe ntụrụndụ Nkọwa | Nchedo
Si echiche ka ihe e kere eke, gị nkenke machining mmiri na-anapụta na oge na kasị elu larịị nke àgwà na iguzosi ike n'ezi.
Nkenke CNC agbanye
Nkenke CNC igwe
Label / Akara
Ngwá Ọrụ Ogo
Gdị Okirikiri Ego
Nnukwu igwe nrịbama
Ndị na-agba ume
Comparators na-ahụkarị anya
Ndị na-eme ụgbọ elu ikuku
CNC Rotary Nyefee
Machinlọ Ọrụ CNC
Mgbapu, igwe na ịme ọpịpị
Robotic ịgbado ọkụ
Deburring / Emecha
Pụrụ iche Parts nhicha Equipment
Andgwè na nkedo
Alloys Light metal
Plastics / Sịntetik
Ngwurugwu na-abụghị nke metal
Pụrụ iche nkwekọrịta n'ichepụta, atụmatụ redundancy na otu ndị raara nye gị.
Hụ otu anyị si eme ya
Na 1950, Silvene Bracalente mepere ụlọ ọrụ igwe na mpụga Philadelphia, Pennsylvania. Ọgbọ atọ ka nke ahụ gasịrị, Bracalente ka bụ onye ezinụlọ nwere ma na-arụ ọrụ ma na -emepụta usoro nrụpụta dabere maka ụlọ ọrụ n'ụwa niile.
Ndị otu anyị bụ ngosipụta nke ụkpụrụ anyị. Hụ ihe kpatara ndị anyị ji bụrụ akụ anyị kacha baa uru.
Kemgbe ihe karịrị ọgbọ atọ, Bracalente Manufacturing Group nọ na-enye nkenke nrụpụta nrụpụta maka ahịa ụwa. Site na ntinye gaa na mmepụta, yana ọnọdụ dị na US, China, Vietnam na India, BMG na-ewepụta ogo, ihe ndị dị na mbara igwe maka ugbo elu, ọrụ ugbo, akụrụngwa, igwe elektrọnik, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ahụike, mmanụ na gas, ihe ntụrụndụ na ụzọ.
© 2022 Bracalente n'ichepụta otu
Anyị na-eji kuki na weebụsaịtị anyị iji nye gị ahụmịhe kachasị mkpa site na icheta mmasị gị na nleta ugboro ugboro. Site na ịpị "Ekwenyere m", ị kwenye na iji kuki niile.
Ụlọ Ọrụ Nchekwa Nzuzo
Maka arụmọrụ na nchekwa, anyị na-eji Cloudflare dị ka netwọọdụ CDN anyị.
Mgbe ị dejupụtara mpempe akwụkwọ na saịtị a, ị na-ekwenye ka Bracalente chekwaa ma hazie data nkeonwe site na Mailchimp na Hubspot. Anyị na-agba mbọ ichebe na ịkwanyere nzuzo gị, anyị ga-eji ozi nkeonwe gị iji duzie akaụntụ gị na iji nye ngwaahịa na ọrụ ị rịọrọ n'aka anyị. Site n’oge ruo n’oge, anyị ga-achọ ịkpọtụrụ gị maka ngwaahịa na ọrụ anyị, yana ọdịnaya ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị. Nwere ike wepu aha na nkwukọrịta ndị a n'oge ọ bụla.
GTranslate bụ ngwa mgbakwunye anyị ji atụgharị ọdịnaya weebụsaịtị na asụsụ dị iche iche. Ọ dabere na Google Translate, nke nwere ike ịtọ kuki "googtrans" iji cheta asụsụ ahọpụtara.
Google Akara ókwú
Saịtị a jiri Google Fonts site na Google API. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị rịọrọ font, adreesị IP gị nke Google dere ma jiri ya mee nyocha.
Anyị na-eji ọrụ YouTube iji mee ka ọdịnaya vidiyo na-asọpụta na saịtị a.
Anyị na-eji Google Analytics na Webtrax iji nyochaa okporo ụzọ weebụsaịtị anyị ma mepụta mgbasa ozi ezubere iche.
Họrọ AS AS.